कांग्रेसी चुनाव प्रचारमा पञ्चायती प्रेत ! « Janata Samachar
कांग्रेसी चुनाव प्रचारमा पञ्चायती प्रेत !
प्रकाशित मिति : 29 November, 2017 2:24 pm
‘म मार्क्सवादलाई आजको ज्ञान विज्ञानको आधारमा अध्ययन तथा विश्लेषण गर्न र समाजवादी विचारधारा, सिद्धान्त र आन्दोलनमा योगदान गर्न प्रयत्न गरिरहनेछु । म नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्न आफ्नो ज्ञान, विवेक र क्षमताले भ्याएसम्म प्रयत्न गरिरहनेछु ।’ अस्ति भदौमा कार्ल मार्क्स जन्म द्विशतवार्षिक समारोहले धुलिखेलमा आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय स्कुल’मा समारोहका संयोजक घनश्याम भुसाल र सह–संयोजक राम कार्कीले यो सपथ गराए । एमाले, माओवादी, संयुक्त, मशाल लगायतका कम्युनिस्ट घटकका ३५० सहभागीहरुले सो सपथ लिइरहेका बेलामा यति छिटै एकता प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भन्ने कसैको मनमा थिएन । तर, एकता गर्नुपर्छ भन्ने हुटहुटी सबैमा देखिन्थ्यो ।
तर, इतिहासमा जानाजान वा अन्जानमा विभिन्न आवश्यकताले मानिसले कोही बेला यस्तो काम गरिदिन्छ कि त्यसले मानव सभ्यतालाई सुदुर भविष्यसम्म प्रभावित पारिरहन्छ । यस्तै एउटा घटना दशैँताका भयो । एकआपसलाई अस्वीकारको तहमा पुगेका शीर्ष नेतृत्वको तहबाटै चुनावी तालमेल मात्र हैन ‘उत्तरआधुनिक शैली’मा कम्युनिस्ट एकताको नै घोषणा भयो ।
प्रधानमन्त्री बन्ने, राष्ट्रपति बन्ने वा ठुलो पार्टीको ठुलो नेता बन्ने चहानाले मात्र यो एकता प्रक्रियालाई निर्देशित गरेको हो भने पनि, यो नेपालको इतिहासमा ज्यादै महत्त्वपूर्ण काम भएको छ । यो कुरा नेपाली समाज र आजको समयको माग थियो ।
एउटा कम्युनिष्टविरुद्ध अर्को कम्युनिस्टलाई कहिले देशका त कहिले बाहिरका शक्तिले उनीहरूको स्वार्थमा प्रयोग गरेबाट भोगिरहेको हैरानीले नेपाली जनता आजित थिए । यति धेरै वामपन्थी रुझानको लोकप्रिय मत हुँदाहुँदै नेपाल भने सधैँ राजनीतिक अस्थिरता र टकरावमा परेको कुराले पिरोलिइरहेका थिए । भर्खरै बनेको संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद कस्तो र कसले भनेजस्तो हो त? यस्ता अफ्ठेरोले उनीहरूलाई अचेटिरहेको थियो ।
यी सबै सन्दर्भमा ‘अब एउटै कुरा आउँछ’ भन्ने सबैको मनमा लाग्यो । यो एकता घोषणा पछाडि कम्युनिस्ट एक भए अब देश जनताको पक्षमा सुशासनसहित अगाडि बढ्छ भन्ने आशा उब्जिएको छ । हिजो कुनै पनि कम्युनिस्ट सरकार, मनमोहन, प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल देखि लिएर केपी ओलीसम्मको सरकारले तत्कालीन अवस्थामा गरेका युगीन कामहरूले नेपाली धर्तीमा स्थिर कम्युनिस्ट सरकारका लागि जनताको प्रयत्न यस एकताले पुरा हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाएको छ ।
झापा क्षेत्र नं १ मै पनि कांग्रेसी बुद्धिजीवी भनिने स्वयम् कांग्रेसका उम्मेदवार आफ्ना एजेन्डा राख्न सकेका छैनन् । कम्युनिस्ट आन्दोलनका अविचलित योद्धा राम कार्कीलाई बाहिरिया प्रमाणित गर्ने बाहेक उनीहरूको अरू कुनै विचार छैन । आफू स्थानीय भन्ने बाहेक लाग्छ अर्को कुनै योग्यता कांग्रेसले देखेको छैन ।
२०४६ सालको परिवर्तनपछि देशमा दुईपटक नेपाली काँग्रेसले बहुमत प्राप्त गर्‍यो । तर त्यो बहुमतको सदुपयोग गरेन । आफ्नै सरकार आफैँले ढाल्ने, देशलाई राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचारको अखडा बनाउने, देशका उद्योग धन्दा कलकारखानाहरु आर्थिक उदारीकरणको नाममा कौडीको मूल्यमा बेच्ने, राजनीतिलाई छलकपट र सत्ताको घिनलाग्दो छिनाझिप्टी बाहेक केही बनाएन र अन्ततः जनताको कठोर सङ्घर्षले प्राप्त लोकतन्त्र फेरी राजदरबारमा बुझायो ।
निरंकुशताविरुद्ध युद्धरत तत्कालीन माओवादी र शान्तिपूर्ण सङ्घर्षमा रहेको एमाले लगायत सबै राजनीतिक दलहरू एकजुट भएपछि ६२,६३को जनक्रान्ति सफल भयो । नेपालका कम्युनिष्टहरुको जोडबल र वैचारिक हस्तक्षेपले देशमा गणतन्त्र आयो । गणतन्त्रप्राप्तिपछि युद्धबाट आएको माओवादी र शान्तिपूर्ण सङ्घर्षमा रहेको एमाले बिचका मतभिन्नताहरुको आडमा नेपाली काँग्रेसले आफ्नो दुनो सोझ्याइरह्यो । यसले जनतामा पैदा भएको निराशा, देश आशातित गतिमा अगाडी बढन नसकेको अनुभूतिले हिजोका तिक्तताहरु विर्सँदै बहुसङ्ख्यक कम्युनिस्ट एजेण्डामा आधारित समाजवादउन्मुख संविधान कार्यान्वयन गर्न नेपालका कम्युनिष्टहरु आज एक भएका छन् ।
तर यतिखेर काँग्रेस भने अत्तालिएर झुठको खेती गर्दैछ । वाम गठबन्धनले अधिनायकवाद ल्याउँछ, रुन पाइँदैन, हाँस्न पाइँदैन र यस्तै अवैध विचार र वाणी बोलिरहेको छ । झापा क्षेत्र नं १ मै पनि काँग्रेसका बुद्धिजीवी भनीनेहरु, स्वयम् काँग्रेसका उम्मेद्धार आफ्ना एजेन्डा राख्न सकेका छैनन् । कम्युनिस्ट आन्दोलनका अविचलित योद्धा राम कार्कीलाई बाहिरिया प्रमाणित गर्ने बाहेक उनीहरूको अरू कुनै विचार छैन । आँफु स्थानीय भन्ने बाहेक लाग्छ अर्को कुनै योग्यता काँग्रेसले देखेको छैन ।
काँग्रेसमा पञ्चायती प्रेतले यसपालि डरलाग्दो प्रवेश पाएको छ । पञ्चायतमा पनि निर्वाचन हुन्थ्यो, स्थानीय व्यक्ति र आवश्यकताका विषयमा उम्मेद्धारहरुले जनतामा कुरा राख्थे तर देश त व्यक्तिमात्रको इच्छाले हैन व्यवस्थाले बन्छ भन्ने नेपाली जनताले बुझेपछि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि जनता आन्दोलित भए । स्वयम् काँग्रेस पनि व्यवस्था प्रमुख हो भन्ने आन्दोलनको एउटा हिस्सा थियो । तर आज झापा क्षेत्र नं १ मा काँग्रेस कुनै व्यवस्था वा प्रणालीको विषयमा छलफल गर्दै छैन । बस स्थानीकता भन्दा माथि उठ्न सकेको छैन ।
मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऊँ लगायतका कार्यक्रम लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्था अन्तरगत सहभागितामूलक विकासको अवधारणामा आधारित कार्यक्रम थियो । आज त्यही विषयलाई अपभ्रंषित गर्दै मनमोहनले ०७४का झापा १का काँग्रेस उम्मेद्वारलाई जिताउन त्यो कार्यक्रम ल्याएजस्तो गरी काँग्रेस विचार राख्दै छ । नेपाली काँग्रेस इतिहासका भारीले किचिएर आगतका कुनै सपना नभएको, एजेन्डा नभएको, कुनै विषय नभएको भजन मिठो स्वरमा गाइरहेको छ ।
जबकि कम्युनिष्टहरु लोकतन्त्र, स्थिर सरकार, सुशासन र समृद्धिको एजेन्डा र कार्यक्रम लिएर आएका छन् । देशमा गरिब जनताको पक्षमा, समानता र सामाजिक न्यायको एजेन्डा लिएर आएका छन् । संविधान कार्यन्वयन र समाजवाद निर्माणको एजेन्डा लिएर आएका छन् । असल व्यवस्था र प्रणाली स्थापित गरे झापा एक मात्र हैन सिङ्गो मुलुक बन्छ । गलत प्रणाली र विचार स्थापित गर्दा न त देश बन्छ , देशै नबने क्षेत्र बन्ने कुरै भएन ।
मनमोहन सरकार आउनुपूर्व कम्युनिष्टहरुले ६० वर्ष पुगेपछि बुढाबुढीलाई गोली ठोक्छन् भनी कांग्रेसीहरुले किटान गरी भनेकै हो । कम्युनिष्टहरु देश मान्दैनन् भन्नेहरुलाई कम्युनिस्ट सरकारले अनमीन बिदा गर्दा होस् वा भारतीय नाकाबन्दीसामू स्वाभिमानका साथ आफूलाई प्रस्तुत गरेको कुरा किन नहोस्, यी सबै कुराले कम्युनिष्टहरुको देश र जनताप्रतिको वफादारिता पुष्टि गरेकै छ ।
कांग्रेसी झुटको इतिहास निकै रोचक छ । हिजो मनमोहन सरकार आउनुपूर्व कम्युनिष्टहरुले ६० वर्ष पुगेपछि बुढाबुढीलाई गोली ठोक्छन् भनी कांग्रेसीहरुले किटान गरी भनेकै हो । कम्युनिष्टहरु देश मान्दैनन् भन्नेहरुलाई कम्युनिस्ट सरकारले अनमीन बिदा गर्दा होस् वा भारतीय नाकाबन्दीसामू स्वाभिमानका साथ आफूलाई प्रस्तुत गरेको कुरा किन नहोस्, यी सबै कुराले कम्युनिष्टहरुको देश र जनताप्रतिको वफादारिता पुष्टि गरेकै छ ।
यी विषयमा कांग्रेसी सरकारका गतिविधि हेरौँ, स्वयम् लोकतन्त्र शिर निहुराउन बाध्य छ । तसर्थ झुट र एजेण्डाहिन नेपाली काँग्रेसलाई यसबेला सान्त्वना बाहेक केही दिन सकिन्न । एजेण्डासहित आएको कम्युनिष्टहरुलाई विजयी गराउनु प्रत्येक सचेत नेपालीको आज युगिन दायित्व हो ।
शब्द/तस्बिरः पुष्पराज अधिकारी हेटौंडा । ८ वर्ष अघिसम्म हेटौंडा उपमहानगरपालिका ९ स्थित कुखुरेनी खोलाको सामान्य
दोलखा । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारले जनअनुसार काम गरिरहेको
कम्बोडिया । कम्बोडियाका दुई वरिष्ठ माओवादी नेतालाई आमनरसंहारको आरोपमा आजीवन काराबास सजाय सुनाइएको छ ।
नेपाली समाजमा प्रचलित उखान मध्ये एकः ‘पैसा देखेपछि महादेवका पनि तीन नेत्र ।’ यो उखानले